FIKAMBANANA AFAKA sy FIKAMBANANA AFRICAN - Pejy 2 amin'ny 2 - Fahafatesana Afrikhepri
Amadou Hampaté Bâ: Izay rehetra miresaka aminao dia iray amin'ireo teraka voalohany tamin'ny taonjato faharoa. Dia niaina ela tokoa izy ary, araka ny anjaranao sy nahita ary nahare be ...
Fiainana sy eritreritra an'i Ahmed Baba (1556-1627)
Teraka tamin'ny 26 Oktobra 1556, tao Araouane, Mali Ahmad ibn Ahmad al-Takuri Al-Musafi al Timbukti dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo mpandinika indrindra tamin'ny androny. Famintinana ho azy ny fiainany ...
Resadresaka nifanaovana tamin'i Cheikh Anta Diop
Cheikh Anta Diop dia mpahay tantara, mpanao antropolo ary mpanao politika mizaka ny zom-pirenen'i Senegala teraka ny 29 Desambra 1923 tao Thieytou Nasongadiny ny fandraisan'anjaran'i Afrika ary indrindra ny an'i Afrika mainty amin'ny kolontsaina sy ny siviliziona manerantany. Sheikh ...
Inona no atao hoe Afrocentricity?
Dr Molefi Kete Asante Profesora ao amin'ny Departemantan'ny Afrikana American Studies University University Philadelphia, PA. Dr. Molefi Kete Asante no namorona ny programa dokotera voalohany amin'ny fampianarana afrikanina ...
Quote from Marcus Garvey
Ny hery manohitra ny fivoarana mainty dia tsy hampitahorina amin'ny fihetsiketsehana am-bava tsotra avy amintsika. Fantatr'izy ireo tsara daholo fa ity ...
Page 2 ny 2 Avant 1 2